Askari dil loogu xukumay kufsiga gabar 4-sano jir ah | KEYDMEDIA ONLINE
Askari dil loogu xukumay kufsiga gabar 4-sano jir ah
Maxkamadda ayaa sheegtay in xukunsanahan uu haysto racfaan, haddii aanu ku qancin xukunkan lagu riday.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah waxay maanta ku ridday, Maxamed Xuseen Cilmi oo ahaa dable ka tirsan ciidanka xoogga dalka, kadib markii lagu helay caddeynta in uu kufsaday gabar Afar sano jir ah.
Maxkamadda ayaa sheegtay in uu qirtay dambiga uu galay, sidoo kalena lagu helay caddeymo buuxda, sidaasi darteedna ay ku xukuntay dil toogasho ah.
Sidoo kale, maxkamadda ayaa sheegtay in xukunsanahan uu haysto racfaan haddii aanu ku qanacsaneyn xukunka lagu riday.
Xukunka maxkamadda ayaa sidan u qoran:
Xafiiska Xeer Ilaainta Ciidamada Qalabka Sida ayaa baaritaan kadib hor geeyay Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, waxaana xilligaasi loo diiwaan geliyay qiraalkii ka dhashay horgeyntiisa Maxkamadeed.